Sunday January 12, 2020 - 11:05:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha Mareykanka ayaa xaqiijiyay in uu lacago dheeraad ah si sandulle ah uga qaatay madaxda dowladda Sacuudiga.
Donald Trump oo wareysi siinayay shabakadda FOX NEWS ee mareykanka laga leeyahay ayaa sheegay in bishii lasoo dhaafay ay lacag Hal Bilyan oo dollar ah ka qaateen dowladda Sacuudiga iyagoo uga bedeshay kumanaan askar American ah oo lageeyay Sacuudiga.
Wuxuu Carrabaabay in uu xiriir la sameeyay boqorka Sacuudiga uuna usheegay in uusan wadankiisa ciidan udiri doonin haddii aan lasiin lacag kadibna dowladda Sacuudiga ayaa Bankiga Mareykanka ku shubtay lacag dhan Hal Bilyan oo dollar.
Bishii Decemer ee sanadii 2019 ayuu Mareykanku ciidan dhan 2000 oo askari geeyay Sacuudiga si ay uga difaacaan weeraro uga yimaad Iiraan, siyaasiyiinta mucaaradka Sacuudiga ayaa Bin Salmaan iyo Wiilkiisa u bixiyay Lo'dii uu Trump Lisanayay!.
Hoos kaa Daawo Caddeymaha Trump
Talyaaniga oo noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka Carona Virus.